A | Raadgoob
Fadlan: Fiiro Gaar ah, ilaali xuquuqda qoraalka, lamana xadi karo waana hanti ma guurto ah, waxaana iska leh Gabaygaan, Mudane Abudullahi Abbas Yusuf ” Abwaan Madani” qof sheegan kara oo kale ma jiro laakiin waxaad u fasaxan tihiin in aad isticmaashaan hadii aad u baahataan waxaase shardi ah inaad raacisaan ama sheegtaan Abwaanka ama mu’alifka magaciisa insha allaah. mahadda 1aad allaa leh, dhamaantiina mahadsanid mar labaad.
Fadlan: Fiiro Gaar ah, ilaali xuquuqda qoraalka, lamana xadi karo waana hanti ma guurto ah, waxaana iska leh Gabaygaan, Mudane Abudullahi Abbas Yusuf ” Abwaan Madani” qof sheegan kara oo kale ma jiro laakiin waxaad u fasaxan tihiin in aad isticmaashaan hadii aad u baahataan waxaase shardi ah inaad raacisaan ama sheegtaan Abwaanka ama mu’alifka magaciisa insha allaah. mahadda 1aad allaa leh, dhamaantiina mahadsanid mar labaad.Fadlan: Fiiro Gaar ah, ilaali xuquuqda qoraalka, lamana xadi karo waana hanti ma guurto ah, waxaana iska leh Gabaygaan, Mudane Abudullahi Abbas Yusuf ” Abwaan Madani” qof sheegan kara oo kale ma jiro laakiin waxaad u fasaxan tihiin in aad isticmaashaan hadii aad u baahataan waxaase shardi ah inaad raacisaan ama sheegtaan Abwaanka ama mu’alifka magaciisa insha allaah. mahadda 1aad allaa leh, dhamaantiina mahadsanid mar labaad.